နေအိမ် / သတင်း / သတင်း / ဓာတ်ငွေ့မီးစက်ကဘာလဲ။
views:0 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2021-09-22 မူလ:ဆိုက်ကို
သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပစ်ခတ်မှုစွမ်းအားမျိုးဆက်သည်သဘာဝဓာတ်ငွေ့သို့မဟုတ်အခြားလောင်ကျွမ်းနိုင်သောဓာတ်ငွေ့ကို အသုံးပြု. လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရန်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဓာတ်ငွေ့မီးစက်သည်ဓာတ်ဆီနှင့်ဒီဇယ်များအစားဓာတ်ငွေ့နှင့်ဒီဇယ်အစားဓာတ်ငွေ့နှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကဲ့သို့သောလောင်ကျွမ်းနိုင်သောဓာတ်ငွေ့အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အင်ဂျင်စွမ်းအားအသစ်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောစွမ်းအင်အသစ်စက်စက်ဖြစ်သည်။ ဤဆောင်းပါးသည်သင့်အားဓာတ်ငွေ့မီးစက်များနှင့်ပတ်သက်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖော်ပြပေးပါမည်။
ဓာတ်ငွေ့မီးစက်startup နှင့်လည်ပတ်မှု, စစ်ဆင်ရေးအရည်အသွေးမြင့်မားခြင်း,
ဓာတ်ငွေ့မီးစက်သည်လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်းသာလှည့်ပတ်နေသဖြင့် ESC သည်လျင်မြန်စွာတုန့်ပြန်မှုမြန်ဆန်ပြီးအထူးချောမွေ့စွာအလုပ်လုပ်သည်။ ဝန်သည် 50% နှင့် 75% ကိုလျှော့ချသောအခါဝန်သည်ရုတ်တရက်တိုးလာသည့်အခါမီးစက်အစုံသည်အတော်အတန်တည်ငြိမ်ခဲ့သည်။ ဓာတ်ငွေ့မီးစက်များ၏လျှပ်စစ်စွမ်းဆောင်ရည်ညွှန်းကိန်းများသည်ဒီဇယ်စက်များထက် ပို. ကောင်းသည်။
2. ကောင်းသော startup စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်မြင့်မားသော startup အောင်မြင်မှုနှုန်း
အောင်မြင်သောအအေးခန်းမှအပြည့်အ00 င်ရန်အချိန်သည်စက္ကန့် 30 သာကြာသည်။ အပေြာင်းဓာတ်ငွေ့မီးစက်မည်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်နှင့်ရာသီဥတုအခြေအနေအောက်တွင်မဆိုအစုံကိုအောင်မြင်စွာစတင်နိုင်ပြီး၎င်း၏အောင်မြင်မှုနှုန်းကိုအာမခံထားသည်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဓာတ်ငွေ့တာဘိုင်သည်မြန်နှုန်းမြင့်လှည့်ဓာတ်ငွေ့ဖြစ်နေသောကြောင့်၎င်း၏တုန်ခါမှုသည်အလွန်သေးငယ်ပြီးကြိမ်နှုန်းနိမ့်သောဆူညံသံသည်ဒီဇယ်စက်များထက် ပို. ကောင်းသည်။
ထိုကဲ့သို့သောဓာတ်ငွေ့, ကောက်ရိုးဓာတ်ငွေ့, ဇီဝကာစစနှင့်စသဖြင့်ဓာတ်ငွေ့မီးစက်သည်လောင်စာဆီအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းသည်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုတွင်စိတ်0င်စားစရာကောင်းသော်လည်း,
လေရဟတ်တာဘိုင်များသည်မီးစက်ကိုလှည့်ရန်တွန်းအားပေးရန်လေကိုမှီခိုအား ထား. လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်း, ဤကဲ့သို့သောမီးစက်မျိုးသည်စွမ်းအင်ထပ်မံသုံးစွဲရန်မလိုအပ်ပါ။
ရေအားလျှပ်စစ်မီးစက်ဟုလည်းလူသိများသည့် hydroelectric generator ကို။ ၎င်းသည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရန်မီးစက်ကိုထုတ်လုပ်ရန်နှင့်စိမ်းလန်းသောသဘာ0သယံဇာတများကို အသုံးပြု. သဘာဝအရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြု. သဘာဝအရင်းအမြစ်များကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်ဓာတ်ငွေ့မီးစက်များကဲ့သို့ညစ်ညမ်းမှုကင်းသောစွမ်းအားမျိုးဆက်ဆိုင်ရာမျိုးဆက်များလည်းဖြစ်သည်။
လောင်စာဆီမီးသတ်မီးစက်သည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရန်မီးစက်မောင်းရန်စွမ်းအားကိုထုတ်လုပ်ရန်ဒီဇယ်သို့မဟုတ်ဓာတ်ဆီများကိုလောင်ကျွမ်းခြင်းအပေါ်မှီခိုသည်။ ဓာတ်ငွေ့မီးစက်အဖြစ်တူညီသောပါဝါမျိုးဆက်မျိုးဆက်နည်းလမ်း။ အကယ်. လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုတစ်ခုရှိပါကလောင်စာဆီမီးစက်သည်အလုပ်နှင့်ဘ0ကိုထိန်းသိမ်းရန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရန်စတင်နိုင်သည်။
ဓာတ်ငွေ့မီးစက်များအတွက် AC Generators အမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိသည်။ ၎င်းကိုအမျိုးအစားနှစ်မျိုးခွဲခြားနိုင်သည်။ AC Generator နှင့် DC မီးစက်တို့ကိုအမျိုးအစားနှစ်မျိုးခွဲခြားနိုင်သည်။
အဆိုပါ alternator ကိုနှစ်မျိုးခွဲခြားသည် - synchronous generator နှင့် allynchronous gentolator ။ Synchronous Generators ကိုနှစ်မျိုးခွဲခြားထားသည် - Hidden-Pole-Spient-Spient Poinchronous Generators နှင့် Serient-Spient Golchronous Generators ။ Synchronous Generators များကိုခေတ်မီပါဝါစခန်းများတွင်အများဆုံးအသုံးပြုလေ့ရှိပြီး,
ဓာတ်ငွေ့မီးစက်အစုံ၏ AC Generator အစုံကိုလည်းအဆင့်တစ်ဆယ့်ကောင်လေးတစ်ယောက်နှင့်အဆင့်သုံးဇရက်ကိုခွဲဝေနိုင်သည်။ output voltages သည် 220V နှင့် 380V အသီးသီးရှိသည်။
အဆိုပါ brush-greated မီးစက်သည်သီးခြားစီစိတ်လှုပ်ရှားမိသည်။ သီးခြားညှိနှိုင်းသည့်မီးစက်၏ Rectifier Device ကိုဓာတ်ငွေ့မီးစက်၏ Stator တွင်တပ်ဆင်ထားပြီး,
အကယ်. သင်သည်ဓာတ်ငွေ့မီးစက်နှင့်ပတ်သက်သောသက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုသင်သိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့လာနိုင်သည်, ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့လာနိုင်သည်။ https://www.meccapower.com.cn
ဓာတ်ငွေ့မီးစက် သဘာဝဓာတ်ငွေ့မီးစက် ဇီဝကာမီးစက် အရည်ရေနံဓာတ်ငွေ့မီးစက်အရည် လျှပ်စစ်ဓာတ်ငွေ့မီးစက် စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ဓာတ်ငွေ့မီးစက် စီးပွားဖြစ်အတွက်ဓာတ်ငွေ့မီးစက်